Shiinaha Dhismaha Saxanka Nadiifiyaha Model 80 Soosaarka iyo Warshadda | Xinrui
1. Quudinta iyo gudbinta: dhig alwaaxda looxa si loo jebiyo;
2. Qufulka quudinta: xakamee xawaaraha quudinta oo ka ilaali xaashida inay siibato oo quudiso;
3. Mashiinka duudduuban ee muquuninta: Mashiinnada alxamida ee alxanka ayaa si siman loogu qaybiyey rullaluistemarka iyadoo la raacayo jihada wareega si loo hubiyo in rullaluistemadka burburaya marwalba isku xoog ku wato jihada wareega
4. Jaangoynta shaxdu waxay leedahay hawsha quudinta iyo jajabinta si isku mid ah si loo ogaado burburka isku midka ah;
5. Rullaluistemadka quudintu wuxuu kobciyaa samaynta taxanaha uck-ka iyo farsamaynta guga, kaas oo la jaan qaadi kara burburka dhumucda saxan ee kala duwan;
6. Rullaluistemadka quudinta iyo duubista rullaluistemadka waxay qaataan nidaamyo awood oo kala duwan, kuwaas oo ay fududahay in la xakameeyo.
1. Baalashka qaaska ah waxaa loo xushay sheybaarka shaashadda ciddiyaha, oo adkaanshaha daabku kama yarayo HRC55 (adkaanta HRC ee feylku waa 51 darajo);
2. Qaab dhismeed adag iyo saxan adag oo si baahsan loo qaybiyey ayaa sanduuqa ka dhigaya mid adag;
3. Xakamaynta badhanka otomaatiga ah, aamin ah, habboon, wax soo saar sarreeya, buuq yar;
4. Qalabka wax lagu jajabiyo ee shaashadda leh ayaa lagu qalabeyn karaa quudinta suunka gudbiyaha.
matoor-awood 110KW ama 132KW
110KW mitir gaari
2975 r / daqiiqo
132KW mitir gaari
Mashiinka weyn ee wax lagu shiido ee aadka u fiican ee PVC waa nooca ugu cusub ee mashiinka wax shiida ee ay soo saarto shirkadayada adoo dhuuqaya tikniyoolajiyadda Jarmalka ee horumarsan. Astaamaheeda waa sida soo socota:
1. Marka la barbardhigo isla nooca wax shiida, soosaarka isla awooda ayaa si weyn kor loogu qaadi karaa lagana badbaadin karaa isticmaalka tamarta.
2. Qalabka boorka laga soo saaro ayaa lagu daraa si wax ku ool ah u yareeya wasakhda wasakhda.
3.waxaa marawaxad ka qaata alaabada, xulashada shaashadda gariirka, xulashada shay aan u qalmin, mashiinka wax shiidaya gadaal si otomaatig ah si loo yareeyo xoojinta shaqada ee wadaha.
4. Daboolka albaabka mashiinka martida loo yahay waa loo furi karaa
fududee dayactirka iyo bedelka qalabka.
5. Isticmaal joomatikada laba-jibbaaran, si fiican u yaree meesha kuleylka ku shaqeyneysa ee ku dhex jirta hawo-mareenka wax lagu shiido oo aan si fudud qaab u ahayn.
1. Naqshadeynta qaabdhismeedka is haysta, cabbirka yar, isticmaalka korontada oo hooseeya, wax soo saar sarreeya.
2. Hawl fudud oo mindi iyo mindi go'an leh oo leh
hagaajinta gacanta, fududahay in la xakameeyo cabirka kala jabka.
3. Qalabku waa sahlan yahay in la beddelo, mindida ayaa si isdabajoog ah u shiidi karta isticmaalka soo noqnoqda.
4. Mashiinka ugu weyn waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka qaboojinta wareegga hawada iyo biyaha.
Hore: Suunka Qafilan ee Magnetic-ga
Xiga: Balaastigga Balaastigga 55kw Qalabka Gawaarida